Faritra Boeny sy Sofia : misy loza mitatao amin’ny rotsak’orana | NewsMada
Faritra Boeny sy Sofia : misy loza mitatao amin’ny rotsak’orana
Par Taratra sur 16/01/2016
Ahina ny fiakaran’ny rano any amin’ny Faritra Boeny sy Sofia vokatry ny rotsakorana be andrasana anio sy rahampitso. Eto Antananarivo, na ambara aza fa tsy misy ny loza, efa miaina anaty petsapetsa sy rano ny vahoka.
Nandefa filazana miloko mena midika ho loza mitatao momba ny habetsahan’ny rotsakorana ho an’ny faritra Boeny sy Sofia ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ho an’ny anio sy rahampitso. Mety hahatratra 50 mm ao anatin’ny 24 ora ny refin’ny rotsak’orana hilatsaka. Filazana fampitandremana kosa ho an’ny distrika Befandriana Avaratra, Mandritsara, Mampikony ary Boriziny. Ahina vokatr’izany ny fiakaran’ny renirano samihafa amin’ny toerana voalaza ka mampitandrina sahady ny tomponandraikitra mba ho mailo ny mponina eny amin’ny faritra iva.
Momba ny mety ho toetry ny andro anio, hanorana malefaka any Sava sy Analanjirofo, somary halefaka izany any amin’ny faritra Boeny sy ny morontsiraka amin’ny faritra Sofia. Handrahona vitsy amin’ny faritra sisa ny tapany maraina. Hifandimby ny rahona sy ny masoandro amin’ny faritra Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Androy, Anosy. Hanorana arahin-kotroka amin’ny faritra sisa.
Tsy misy loza manambana amin’ny lemak’Antananarivo momba ny fandehan’ny rano, araka ny fanambaran’ny Apipa, omaly maraina. Nidina avokoa ny haavon’ny renirano telo tao anatin’ny 24 ora ary mbola hidina ho an’ny 12 ora manaraka. Hafana ny andro eto Antananarivo, 27°C ny maripana ambony indrindra.